laacibfm.com » Michael Owen Oo Magacaabay Saddexda Kooxood Ee Liverpool Kula Dagaallami Doona Horyaalka Xili Ciyaareedka Dambe
Michael Owen Oo Magacaabay Saddexda Kooxood Ee Liverpool Kula Dagaallami Doona Horyaalka Xili Ciyaareedka Dambe
Halyeygii hore ee Liverpool ee Michael Owen ayaa magacaabay kooxaha xili ciyaareedka dambe horyaalka Premier League kula dagaallami doona Liverpool ee ay dhibaatada ku kala mudan doonaan.
Kaddib xili ciyaareedkii hore oo City ay hal dhibic kaga qaadday horyaalka, Liverpool ayaa hanatay Champions League, waxaanay xili ciyaareedkan soo ceshatay koobka farahooda dirqiga kaga baxay, iyagoo guuleystay 28 ka mid ah 31 ciyaarood oo ay dheeleen, isla markaana hoggaanka ku haya 23 dhibcood oo nadiif ah.
Reds oo horyaalka loo caleemo saaray toddobaadkii hore markii ay Chelsea 2-1 ku garaacday Manchester City oo kaalinta labaad ku jirtay, waxay saf sharafeed ka sugaysaa City oo ugu samayn doonta Etihad Stadium khamiista soo aaddan.
Michael Owen oo waqti qurux badan oo uu ku qaatay Anfield kaddib u safray Real Madrid, Newcastle iyo Manchester United, ayaa rumaysan in xili ciyaareedka dambe uu ka duwanaan doono midka hadda oo tartan adag ay Reds kala kulmi doonto naadiyada Manchester United, Manchester City iyo Chelsea.
“Waxaan qabaa in Liverpool ay tahay koox aad iyo aad u xoogan oo laga yaabo inay sii xoogganaato in muddo ah. Laakiin ma odhanayo, lama qaban karayo. Manchester City ayaa koox cajiib ah oo si wanaagsan ugu tartami doonta horyaalka.” Ayuu yidhi Michael Owen.
“Manchester United ayaa ah kooxda ugu horreysa ee aan ahayn labadan ee maskaxdaada kusoo dhacaysa, sababtoo ah horumarka soo kordhaya ee ay samaysay. Chelsea ayaa muujinaysa ifafaale wanaagsan iyo saxeexyo.”